Turkiga oo hanjabaad adag u jeediyay Mareeykanka - Hablaha Media Network
Turkiga oo hanjabaad adag u jeediyay Mareeykanka
HMN:- Dowlada Turkia ayaa Digniin U Jeedisay Mareykanka in ay soo gud biyaan ninka lagu ee deynayo inuu ka dambeyo af gabbigii Dhicisoobay ee Turkiga Fethullah Gülen hadii uu soo gudbin waayane sheegeen in ay dhawac xoogan u geysanyo xiriika labada dal.
Hadii Mareykanka uu soo gudbin waayo ama soo gacan galin waayo Gülen wexey taasi micnaheedu tahay in xiriirka labada dal ay ka door bideen argigixisada. waxaa sidaasi yiri wasiirka cadaalada dalka Turkia
Dowlada Turkia ayaa siwayn ugu celcelisay in maraykanka ay ka dooneyso Fethullah Gülen tan iyo 15 july markii uu dhacay af gambigii dhicisoobay ee dalkaasi.
Todobaadkii tagay Ayaa garyaqaano matalayay Gülen wexey sheegeen in dowlada Turkiga ay san heyn wax cadeyma ah oo muujinaya in Fethullah Gülen uu ku lug leyahay afgambigii dhicisoobay ee ka dhacay dalkaas Turkia.
Xukuumada waashiton ayaa sheegtay in lagaga baahan yahay dowlada Turkiga in ay shaaca ka qaado cadeymaha muujinaya in Gülen uu qeyn ka yahay Dadkii ka dambeyay falal kaasi ladoonayay in lagu af gambiyo madax weynaha dalkaasi Turkia Recep Tayyip Erdogan.